Kushandura zvatinokoshesa tichikoshesa chiedza
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Kushandura zvatinokoshesa tichikoshesa chiedza
Kushandura zvatinokoshesa tichikoshesa chiedza
Hazvirambike kuti kune mabasa akanaka akaitwa kupfurikidza hushumiri hwaWilliam Branham. Mwari vakamushandisa kwazvo muhushumiri hwakaita sehwaEria sezvavakavimbisa kuti vachaita kuna Mateo 17:11-12 kuuya kwake kwechipiri kusati kwasvika. Kubva pamabasa aya vakawandisa vakamutevera mukati mehafu yesenturi yadarika zvisinei nemafiro aakaita muna 1965. Zvisinei, kuita kweminana mizhinji nehunhu hwake hwaive hwakanakisa zvakaita kuti vazhinji vamusimudzire zvakanyanyisa kupinda chinzvimbo chaangapiwe neBhaibheri. Bhaibheri rinotiyambira kuti izvi zvichaitika zvakaoma kudaro zvasiya vanhu vakatendeka vazhinji vari mumusungo mukati memakereke anotevera muporofita vasingazivi uye vasingateveri chokwadi chiri muBhaibheri. Mweya waAntiKristu uri kunyengera vanhu nekungofonyora zvinorehwa nemazwi akataurwa, achitsiva ruzivo rweBhaibheri nemazwi aWilliam Branham akaturikirwa nevamwe vatauri.
Pauro akatiyambira pamusoro peizvi:
2 VAKORINTE 12:6 Nokuti kana ndichida kuzvirumbidza, handingavi benzi; nokuti ndichareva zvamazvokwadi; asi ndinorega hangu, kuti kurege kuva nomunhu ungati ndiri mukuru kune zvaakavona kana zvaakanzwa kwandiri.
Bato rakaitwa pamusoro paWilliam Branham nehushumiri hwake rinodaidzwa kuti “ Mharidzo (The Massage)”. Vakawanda vangakakavara pachokwadi kuti “Mharidzo” harisi sangano vanobva vaenda mberi kunopa tsananguro yavo yekuti “Mharidzo” zvinorevei kwavari. Vamwe vanoti hupenyu hwake, hushumiri uye shoko rega rega kubva pakuparidza kwese kwaakaita. Vamwe vanoti ishoko rakavanzika kana kuti zaruriro inofanirwa kuwanikwa nemunhu panenge pachiparidzwa Shoko kana akabatanidza zvese izvi zvinomubuditsira “ Mharidzo”. Asi mukati mezvose izvi mugere chakavanzika. “Mharidzo” inobva yazoreva chero tsananguro yawada iwe, chero chinhu chinonzwika sechitsvene kana chakanaka. Kumwe kutsanangura kana kuturikirwa kweizvi kuri kure nechokwadi kukunda kumwe. Kana zvisinei chinhu chiri nechokwadi machiri, kune tsananguro inozivikanwa ine zaruriro inozivikanwawo kubva muBhaibheri. Sangano rinozivikanwa nehunhu hwemafambiro ezvinhu mariri kana kuti vabati vezvinhu vanoritonga. Vafundisi vanotonga makereke nerumwe rutivi, koita ruoko rwedare runotonga Izwi raMwari rinotapwa nekubata kutonga pakuparidzirwa nekushandurwa kwerurimi pamharidzo dzaWilliam Branham nerumwe rutivi, ndiwo masangano akanyatsoiswa mafuta akakwana kuti afambe zvakanaka.
Dai Kwaive nechinhu chinonzi “Mharidzo” taidii kutsvaga kuti chii uye kuti chinorevei kubva muBhaibheri? Hushumiri hwaWilliam Branham hwakava nesimba nekuti hwakariwana kubva muBhaibheri.
1 Johani 1:5 Heyi mharidzo yatakanzwa kwaari, yatinokuparidzirai vo, kuti Mwari chiedza, hamune rima maari.
Johane haana kubvira ataura nezvesangano rekereke, pachinzvimbo akataura zvaive mukati. Tisingashamiswi kuti akaisa kukosha pana Mwari kwete pamunhu.
Kufanana kuzhinji kunowanikwa pakati pemaporofita muBhaibheri vakaporofita nguva yekupedzisira, nehupenyu nehushumiri hweHama Branham. Ngatitarisei pamienzaniso yekuti zvinhu zvimwechete zvakaitika sei kuvarume ava uye kuti tingaone sei mweya uyu. Johane Mubhabhatidzi kanokwana kuita kana muchaputa yekutanga yebhuku raJohane, akasimbisa kuti haasi Jesu Kristu.
Johane 1:7 Iye wakauya kuzopupura, kuti apupurire chiedza, kuti vose vatende naye.
9 Ichi chaive chiedza chazvokwadi, chinovhenekera munhu mumwe nomumwe pakusvika kwacho panyika.
15 Johane akamupupurira, akadanidzira achiti, Uyu ndiye wandaireva ndichiti; uyu unouya shure kwangu wakavapo mberi kwangu; nokuti wakanditangira.
19 Uku ndiko kupupura kwaJohane, musi vaJuda vakatumira kwaari vaPirisita navarevhi, vachibva Jerusarema, kundomubvunza, kuti; Iwe ndiwe aniko?
20 Akatenda pachena, haana kuramba, akatenda pachena, achiti: Handizi Kristu.
27 Ndiye unovuya shure kwangu, asi uri mberi kwangu, wandisina kufanira kuti ndisunungure rukanda rweshangu yake.
Kusimbisa nekukoshesa zvaaitaura uku kwaisava kukanganisa. Dai Johane asina kusungwa akazouraiwa, vazhinji vevaimutevera vangadai vasina kuenda mberi kunotevera Jesu. Vhesi rinotevera racho rinotaridza pachena kuti Johane aive achiri nevateveri vaimuda kwazvo apo hushumiri hwaJesu hwaive hwatotanga kufambira mberi. Nei ava vaive vasingateveri Jesu?
Mateo 9:14 Zvino vadzidzi vaJohane vakauya kwaari vakati, Isu navaFarise tinozvinyimireiko zvokudya kazhinji asi vadzidzi venyu havazvinyimi neiko?
15 Jesu akati kwavari, shamwari dzechikomba dzingacheme seiko chikomba chichiri navo? Asi mazuva achasvika achabviswa chikomba kwavarinenguva iyo vachazvinyima zvokudya.
Jesu akavabvisa pakuva mwenga waKristu.
Ruka 7:18 Vadzidzi vaJohane vakamuvudza izvozvo zvose.
19 Johane akadana vadzidzi vake vaviri, akavatuma kuna Jesu neshoko rokuti: Ko ndimi iye wakanga achinzi unovuya here, kana kuti tichakamirira mumwe?
20 Zvino varume vachisvika kwaari, vakati: Johane mubhabhatidzi wakatituma kwamuri neshoko rokuti: Ko ndimi iye wakanga achinzi unouya here? Kana tichakamirira mumwe?
24 Nhume dzaJohane dzakati dzabva, akatanga kuudza vanhu pamusoro paJohane, achiti: makanga mabuda kundovoneiko murenje? Rutsanga runozununguswa nemhepo here?
Jesu akatanga kutaura nevadzidzi vake mushure mekunge vadzidzi vaJohane vabva, saka vakarasikirwa nezvaizotaurwa naJesu.
Ruka 11:1 Zvino akati achinyengetera pane imwe nzvimbo, apedza, umwe wavadzidzi vake wakati kwaari, Ishe, tidzidzisei kunyengetera, Johane sezvaakadzidzisa vadzidzi vake vo.
Zviri pachena kuti vadzidzi vaJohane vaive vasiri naJesu.
Chinhu chikuru muhupenyu hwedu kutevera Jesu Kristu ndicho chinhu chekutanga uye chakakoshesesa. Vadzidzi vaJohane vaviri vakaona izvi:
Johane 1:35 Ava mangwana zve, Johane wakanga amire navadzidzi vake vaviri;
36 Akatarisa Jesu achifamba, akati: Tarirai Gwaiyana raMwari!
Pano tinoona chokwadi chakareruka asi chiri chikuru. Tinofanira kutevera Jesu. Musatevere munhu, mufundisi kana vazhinji vemukereke menyu. Pima zvinhu zvese nechokwadi chemuBhaibheri, Shoko raMwari. Bhaibheri rinofanira kuva mutungamiri wako.
Johane aiziva kuti aizofa uye kuti zvinhu zvaifanira kuva saizvozvo kuitira kuti Jesu akudzwe pamusoro pake. Saka akataura mashoko anotevera:
Dai tose taive nekuita seuku taizova nekufamba kuri pedyo naJesu Kristu. Tinofanira kuramba kuda kwedu totora kuda kwake kunyangwe zvichiita sezvinooma kwatiri. Mwari neShoko ravo vanofanira kukudzwa kukunda zvatinofunga isu uye kukunda mazwi echero munhu kana muporofita. Jesu Kristu ndiye akakosha, Ndiye mumwechete kwaari ndiye chiedza chinopenya.
Mapisarema 119:105 Shoko renyu ndiwo mwenje wetsoka dzangu, Nechiedza panzira dzangu
2 Vakorinte 4:6 Nokuti Mwari, wakareva kuti chiedza chibude parima, ndiye wakavhenekera mumoyo yedu, kuti atipe chiedza chokuziva kubwinya kwaMwari kunovonekwa pachiso chaJesu Kristu.
Tinofanira kuona kuti chiedza chaMwari chiri kufamba chichienda kupi. Kana chiedza chikafambira mberi tinofanira kufamba pamwe nacho. Hama Branham vaigarokoshesa chiedza chiri muShoko Bhaibheri, uye Mwari ari muShoko rake.
63-0623 CHIEDZA CHITSVUKU CHINOPENYA CHECHIRATIDZO CHEKUUYA KWAKE JEFFERSONVILLE.IN V-5 N-4 SVONDO_
81 Asi hechi chimwe chinhu. Kana munhu akadanwa naMwari, anofanira kurarama neBhaibheri, handinei nezvimwe zvaanoita. Munofanira kurangarira kuti Ichokwadi. Uye chokwadi chinosunga kana kusunungura. Izvi ndizvo chaizvo zvakataurwa naJesu Kristu.
63-1201 NDIRI MUKURU_ SHREVEPORT.LA V-17 N-10 SVONDO_
« 88 † Vamwe semakereke nhasi uno, makereke mazhinji ane vakuru vawo. Kereke yega yega ine mukuru wayo, sezvaive zvakaita mazuva evatongi, munhu wese aiita zvaaifunga kuti zvakanaka. Asi izvozvo hazvina kunaka. Tarirai, ndipo Shoko raMwari nemaporofita zvaive zvisipo. Shoko ndiro mukuru. Vaive nevakuru vavo. Umwe nemumwe aiti ndiye Chokwadi uye nzira , “Ndisu Chokwadi uye nzira.”
89 Asi Jesu akati Ndiye Chokwadi uye ndiye Nzira, “ Chokwadi, nzira uye Chiedza.” Ndizvo here? [Ungano inoti “Amen.”-Ed] Zvakanaka, saka, Ndiye Shoko, saka kwave nemukuru. Saka mukuru wemasagano, hakuna chiriko kwaari; zvakaipa, siyanai nazvo.
Vakawanda vangakakavare, pachokwadi, hakuna makwikwi akaitika pakati pa Jesu naWilliam Branham. Zvisinei kubva panhorondo tinonzwa kuti makwikwi pakati pehushumiri hwaJohane Mubhabhatidzi naJesu aive akasimba, zvekuti akataura kutaura kunotevera:
Johane 5:35 Iye aive mwenje unopfuta unovheneka: imi makanga muchida kufara nguva duku muchiedza chake.
36 Ini ndine chapupu chikuru kuna Johane: nokuti mabasa andakapiwa naBaba; kuti ndiapedze, iwo mabasa andinoti , ndiwo anondipupurira kuti Baba vakandituma.
Haasi makwikwi akaitwa naJohane pachake, kana naWilliam Branham, asi anosimuka kubva mukati mevateveri. Jesu angazvifananidzirei naJohane kana paive pasina makwikwi akaita seawa? Hama Bhranham vaida kusiya kushumira nekuda kwechikonzero chimwechete ichi.
61-0611 ZVAKAZARURWA CHITSAUKO CHECHISHANU.1_ JEFFERSONVILLE.IN ROJC 717-746 SVONDO_
« 23 † Kana paine chinhu chandainzwa kuda kuita nemoyo wangu, kwaive kunzwa mashoko aIshe wedu Jesu Kristu kumapeto kwerwendo urwu, kuti, “zvakaitwa zvakanaka, muranda wangu akanaka akatendeka.” Nguva zhinji ndakati ndinoda kuvapo paanoti, “Huya kwaNdiri”; asi ndinoshuwira kunzwa achiti, “waita zvakanaka.” Nekuti handina kunzwa Izwi, mukutanga kwaro, richiti, “Huya Kwandiri,” kumashure munguva yekunyorwa kweBhaibheri; asi ndinoshuwira kunzwa richiti, “Wakarwa kurwa kwakanaka.”
Ndinoita izvi mangwanani ano nemoyo wangu wese.
Uye chinhu chandaishuwira kuva, uye kuda kwemoyo wangu kuva, kwaive kuva muranda waJesu Kristu wechokwadi, Ishe wangu naMuponesi wangu. Ndaida kuti kupupura kwangu kuve kwakachena, kwakachekwa zvakachena, zvekuti ndinosimuka kumira, pazvose zvandakakanganisa ndichiramba ndichida Kristu nemoyo wangu wose. Uye ndinoita izvozvo kuseni kuno nemoyo wangu wose. Uye, nokuda kwaizvozvo, zvinondimanikidza kuti nditi ndave kusiya hushumiri, ndezvekuti kune chinhu chasimuka pakati pevanhu chandiita kuti ndidaro, chekuti, ndakatorwa kubva “panzvimbo yangu” yekuva mushumiri kana kuti “hama” ndikadaidzwa kuti Jesu Kristu, saka nekudaidza kudaro.... uye zvinondiita kuti ndive muantikrstu. Ndichasangana naMwari semukundikani pachinzvimbo chekusangana naye semuantikristu akatora chinzvimbo chake.
« 26 † Ndakazvinzwa makore mashoma adarika ndikafunga kuti kwaive kuseka. Ndakasangana nehama dzakati kuti (handisi kuona kana mumwechete wavo muno mangwanani ano), vairi kana vatatu vavo nguva imwechete murwendo rwekupedzisa, vakauya kwandiri nenyaya inoti, “Hama Branham, hamusimi here Mesiah akazodzwa, Kristu?”
Ipapo ndakaisa maoko angu pahuro pehama idzi dzese, ndikati, “Hama munaShe, sekuedza kwandaita kuva muranda waKristu wechokwadi, handingadi kuti mutaure chinhu chakaita seichi. Kana chikataurwa zvakare pamusoro pangu, ndichasiya basa iri ndisina mhosva yandapara, uye imi mataura chinhu chakadaro muchava nemhosva pamusoro pemweya yandingadai ndaizotendeutsira kuna Jesu panguva iyoyo; tarirai, nekundibvisa kubva pabasa.” ndikafunga kuti izvi zvakazvipedza.
Mumwe muenzaniso unowanikwa kuna Danieri. Danieri akaburitsa pachena chiroto chaive chakavanzika chamambo Nebhukadhinezari, chipo chakafanana nechaive neHama Branham. Mushure mekunge mambo vaona chipo chakanakisa ichi akatanga kunamata Danieri.
Danieri 2:46 Ipapo mambo Nebhukadhinezari akawira pasi nechiso chake, akanamata Danieri, akaraira kuti vamuvigire chipo nezvinonhuwira zvinozipa.
47 Mambo akapindura Danieri, akati: Zvirokwazvo Mwari wako ndiye Mwari wavamwari, naShe wamadzimambo, nomuzivisi wazvakadzama, iwe zvawakagona kuzivisa chinhu ichi chazvakavanzika,
48 Ipapo mambo akaita Danieri mukuru, akamupa zvipo zvikuru zvizhinji, akamuita mubati wenyika yose yeBabironi, nokumuitawo mutariri mukuru wevakachenjera vose veBabironi.
Nebhukadhinezari haana kuramba kuti Mwari variko, asi akaona Danieri saMwari vaizviratidza kwaari. Kunzvengeswa kwechowadi kwakachenjera. Vateveri vaWilliam Branham vazhinji vanoita chinhu chimwechete ichi. Humbowo hunoenda mberi tinohuwana muchaputa inotevera.
Mushure mukupupura kuti “Mwari ndiMwari wavamwari,” Nebhukadhinezari akaenderera mberi kunoita mufananidzo wendarama. Zvinoshamisa mushure mukusangana nezvaaive asangana nazvo.
Danieri 3:1 Zvino mambo Nebhukadhinezari akaita chifananidzo chendarama, chakanga chakaita mamita makumi matanhatu pakureba, namamita matanhatu paupamhi; akachimisa pabani reDhura munyika yeBabironi.
2 Ipapo mambo Nebhukadhinezari akatuma vanhu kundokokera machinda navarayiri namadzishe navatongi navachengeti vefuma namakurukota navazivi vemirairo navabati vose vemativi enyika, kuti vavuye kumutambo wokugadzwa kwechifananidzo chakanga chamiswa naNebhukadhinezari.
Munhu wese aifanira kuvapo nekuda kwekuraira kwamambo. Shadreki Misheki naAbhedinigo vaive vava panjodzi nekuti havana kunamata mufananidzo. Asi ko iye Danieri aive kupi chokwadi? Danieri aisazonamata mufananidzo uyu . Asi Danieri haana kubvira apinda panjodzi. Zvakare aive asipo pachiitiko ichi chose. Chokwadi ndechekuti mufananidzo uyu waive mufananidzo waDanieri. Mambo vaisakwanisa kuti Danieri nemufananidzo vose vange varipo nguva imwechete.
Zvisinei neminana yakanaka nezvese zvakasangana naNebhukadhinezari; akaratidzira, muhupenyu hwake, hunhu chaihwo hwemunhu anokudza nekunamata munhu. Hunhu uhu hwakaipa kuzvinatsa uye kuzvida. Tinoona mweya mumwechete uyu muvanhu nhasi uno.
Mumashure mekunge Mwari varwadzisa mambo ndipo paakazoziva zvakanaka nezvakaipa. Akazonamata Mwari kwete munhu.
Danieri 4:34 Zvino mazuva iwayo akati apera, Ini Nebhukadhinezari ndikatarira kudenga nameso angu, simba rangu rekufunga rikadzokerazve kwandiri, ndikatenda wokumusoro-soro, ndikamurumbidza nokumukudza iye ari mupenyu nokusingaperi, nokuti ushe hwake hauperi, nokubata ushe kunosvikira kumarudzi namarudzi;
37 Zvino ini Nebhukadhinezari ndinorumbidza nokuombera nokukudza mambo wokudenga; nokuti mabasa ake ose ndeechokwadi, nzira dzake dzakarurama; iye anogona kuderedza ivo vanofamba vachizvikudza.
Bhaibheri rinodzidzisa kuzvideredza kwete kuzvikudza. Mweya wekuzvikudza unobva pakusagadzikika uye pakutya. Kana pakaita chakanganisika kana kutadza pamunhu anokwiridzirwa, chii chimwe chinenge chaipa ipapo? Kana vakabvuma kuti munhu wenyama anokanganisa vanofanira kubvuma kuti vaitadza, uye zvese zvavanotenda mazviri zvinobva zvawira pasi. Vanhu vashoma kwazvo vanozvipira kuita izvi. Zvakadaro kana usingagoni kubvuma kuti uri kutadza unozopinda munguva yekutambudzika kukuru. Mharidzo kukereke yekupedzisira ndeiyi;
Zvakazarurwa 3:19 Vose vandinoda ndinovaranga nokuvarova; naizvozvo shingaira utendeuke.
Tinofanira kuzvideredza totendeuka nekushingaira kukuru. Kutendeuka nekushingaira zvinoreva kuti uri kubvuma zvakaipa zvako wotsvaga zvese zvaunokanganisa wozvisiya wotendeukira kuna Mwari. Tinofanira kusiyana nezvinyakare zvedu nepfungwa dzese nemashoko atakabata akavakika mukati mekukura atinenge taona kuti haamo muBhaibheri.
Umwe muenzaniso unobva kuna Pauro naBanabhasi. Vaiparidza uye minana mizhinji mikuru yakaitwa naJesu Kristu kupfurikidza hushumiri hwavo sezvakaitwawo pana William Branham.
Mabasa 14:8 Zvino paRistra, paigara mumwe murume wakange asine simba patsoka dzake, chirema kubva padumbu ramai vake, asina-kutongofamba.
9 Iye wakanzwa Pauro achitaura, zvino iye wakati achimutarisisa, akaona kuti unokutenda kuti angaporeswa,
10 Akati nezwi guru: Mira kwazvo netsoka dzako. Iye akavazuka akafamba.
11 Vanhu vazhinji vakati vaona zvakaitwa naPauro vakadanidzira norurimi rwavaRikaonia, vachiti: vamwari vaburukira kwatiri vaita savanhu.
12 Barnabasi vakamutumidza Jupiteri naPauro Merkurio, nokuti ndiye waive mutauri mukuru.
Vanhu vaive vafadzwa kwazvo vaitoda kuvanamata nekubaira zvibairo kwavari.
Mabasa 14:13 Ipapo mupurisita waJupiteri waive netemberi yake pamberi peguta, akauya pamusuvo nenzombe namaruva okushonga, achida kuvabaira, ana vanhu vazhinji naye.
SeHama Branham vakanga vabatwa neizvi vakaita zvese zvavaigona kuzvimisa:
Mabasa 14:14 Zvino vaapositora, Barnabasi naPauro, vakati vachinzwa izvozvo, vakabvarura nguvo dzavo, vakamhanyira pakati pavanhu vazhinji, vakadanidzira,
15 Vachiti : Varume munoitireiko izvozvo? Nesu tiri vanhu semivo, tinokuparidzirai mashoko akanaka, kuti mubve pana izvozvo zvisinematuro mutendevukire kuna Mwari mupenyu wakaita denga napasi, negungwa, nezvose zviri mukati mazvo.
Pavakati havasi vamwari , vaiti vanhu ava vachamira kuita uku. Asi hazvina kuita sekudaro. Pano panoratidzirwa kuti mweya uyu wekuda kunamata vanhu waive nesimba rakaita sei.
Mabasa 14:18 Nokutaura kwavo saizvozvo, vakatambura kwazvo kudzivisa vanhu, kuti varege kuvabaira.
Hama Branham vakaedza kuita chinhu chimwechete ichi. Zvisinei vakakundikana kudzivisa vanhu saka nanhasi mweya waantikristu uyu wakakurisa mumakereke nhasi.
Tinowana mumwe muenzaniso zvakare pahushumiri hwa Erisha. Mambo weSiria aida kuparadza Israeri asi aikundwa nguva dzose apo Mwari vaiudza Erisha kwekuisa misasa yavo kuitira kurwa.
2 Madzimambo 6:11 Naizvozvo moyo wamambo weSiria ukadziyaniswa kwazvo pamusoro pechinhu ichi; akadana varanda vake akati kwavari: Hamungandiratidzi here, kuti ndianiko pakati penyu anonzwana namambo waIsraeri?
12 Mumwe wavaranda vake akati: kwete, ishe wangu mambo; asi Erisha muporofita, uri pakati paIsraeri, ndiye unoudza mambo waIsraeri mashoko amunotaura muimba yenyu yemukati.
13 Akati: Endai mundotarira kwaari, nditume vanhu kuzomutora. Akavudzwa zvichinzi; uri paDotani.
Pano Erisha anoratidzira chipo chimwechete chaive neHama Branham. Mambo havana kuraira mauto avo kuti auraye Erisha asi kuti vamutore. Nei? Kuitira kuti mambo vashandise simba rina Erisha mukubudirira kwake iye. Pachinzvimbo chekudana kuna Mwari kuti vawane rubatsiro, mambo weSiria aida kuvimba muchipo chaive nemunhu wenyama. Chitadzo chikuru. Mauto ake akapedzisira aitwa mapofu nemunhu wavaive vaenda kunotora.
2 Madzimambo 6:18 Zvino vakati vachiburukira kwaari, Erisha akanyengetera kuna JEHOVA , akati; Dorovai vanhu ava novupofu. Jehova akavarova novupofu, sezvakanga zvarehwa naErisha.
19 Erisha akati kwavari: haizi iyo nzira, vuye guta iri harizi iro; nditeverei ini, ndikuisei kumunhu wamunotsvaga. Akaenda navo Samaria.
Havana kupofomadzwa zvizere panyama, asi hupofu hwekutadza kuziva kuti Erisha aive ani uye nzira.
Johane 14:6 Jesu akati kwaari: Ndini nzira, nezvokwadi, novupenyu; hapanomunhu unovuya kunababa asi nokwandiri.
Kereke nhasi inosangana nedambudziko rimwechete iri sekuporofitwa kwazvakaitwa pamusoro penguva ino
Zvakazarurwa 3:17 Nokuti unoti, ndakafuma, ndakafumiswa, handishaiwi chinhu; usingazivi kuti ndiwe unovurombo nenhamo, uri murombo nebofu usine chokufuka.
Tinofanira kuziva kuti Hama Branham vaitovawo muhu wenyama sesuwo, uye kuti Jesu Kristu ndiye ega nzira.
Muenzaniso wekupedzisira unowanikwa kuna Zvakazarurwa.
Zvakazarurwa 19:10 Ipapo ndakawira pasi pamberi petsoka dzake, kuti ndimunamate. Akati kwandiri; rega kudaro, nokuti ndiri muranda pamwechete newe, nehama dzako dzinobata kupupura kwaJesu; namata Mwari, nokuti kupupura kwaJesu ndiwo mweya wokuporofita.
Zvakazarurwa 22:8 Ini Johane, ndini ndakanzwa, ndikavona izvozvo. Zvino ndakati ndichinzwa, nokuvona izvozvo. Zvino ndakati ndichinzwa, nokuvona, ndikawira pasi kuti ndinamate pamberi petsoka dzomutumwa wakandiratidza izvozvo.
9 Akati kwandiri: Rega kudaro: ndiri muranda pamwechete newe, nehama dzako, vaporofita, navanochengeta mashoko ebhhuku iyi; namata Mwari.
Kaviri kese Johane akafadzwa nezvaakaratidzwa nemutumwa zvekuti akawira pasi kuti amunamate. Saizvozvo Mwari vakaratidza zvinhu zvakavanzika zvizhinji kupfurikidza hushumiri hweHama Branham. Asi kuraira kunoramba kuri kumwe. “Rega kudaro” uye “Namata Mwari”.
Musakanganise kufunga mofunga kuti kuita kwaantikristu kuita kutsva kwakaipa kunobva kunze kwekereke. Mweya waantikristu utori mukati mukereke imomo:
30 Vuye, napakati penyu pamene pachamuka varume, vachataura zvinopesanisa , kuti vatsaure vadzidzi vadzidzi vavatevere.
31 Naizvozvo rindai, murangarire kuti makore matatu handina kurega vusiku namasikati kuraira mumwe nomumwe nemisodzi.
Johane akayambira kereke pamusoro paantikristu aive atove pakati pavo kanokwana kuita kana:
1 Johane 2:18 Vana vaduku, inguva yokupedzisira: sezvamakanzwa kuti: antikristu anovuya, nazvino vanaantikristu vazhinji vavapo; ndizvo zvinotizivisa kuti yava nguva yokupedzisira.
1 Johane 2:22 Ndiyaniko murevi wenhema, kana asati ari iye anoramba kuti Jesu ndiye Kristu? Ndiye, unoramba baba noMwanakomana.
1 Johane 4:3 Mweya mumwe nomumwe usingapupuri kuti Jesu Kristu wakavuya panyama, hauzi waMwari: iwo ndewaantikristu, wamakanzwa kuti unovuya: nazvino watova panyika.
2 Johane 1:7 Nokuti vanyengeri vazhinji vakabudira munyika, vasingapupuri kuti Jesu Kristu wakauya panyama. Ndiye munyengeri naantikristu.
Satani ndiye munyengeri, haatori kereke nechisimba, asi anovazivisa kutadza kwakachenjera. Kristu zvinoreva kuti Wakazodzwa. Jesu Kristu wakauya panyama. Ndiye Wakazodzwa. Kana tikaita Hama Branham kana mumwe munhu akaita saPope Wakazodzwa, tinenge taramba kuti Jesu Kristu ndiye Wakazodzwa. Bhaibheri ndiro rega chombo chedu, munondo wedu wemweya, kuti tirwise mweya waantikristu. Bhaibheri iBhuku rechiporofita, hakuna rimwe rakafanana naro. Nemienzaniso iyi tinokwanisa kuona kuti mumashure mweya waantichrist waive chii uri kuitei iyezvino uye kuti uchazviratidza sei munguva inotevera. Rwisa mweya uyu Mwari havazobva parutivi rwako.
Kana tikataura kutaura kwakaita sekwekuti “Mharidzo” (The Massage) zvakafanana nekuti Bhaibheri, tinosimudzira Hama Branham kwazvo. Tinovaita Wakazodzwa. Munhu akarurama chete ndiye anokwanisa kutaura mashoko akarurama. Hama Bhanham vaive vasina kururama vaitotadzawo semunhu wenyama.
61-0611 ZVAKAZARURWA CHITSAUKO CHECHISHANU. 1_ JEFFERSONVILLE.IN ROJC 717-746 SVONDO_
« 21 † Uye zvinondiunza kana kundikonzeresa kuti nditaure chimwe chinhu chekuti ndingasarudze kutiza pane kuchitaura. Zvinondiita kuti nditaure chimwe chinhu... Zvinondidya moyo pasi pemoyo wangu kuzvitaura, asi zvandiri kutaura ndinomanikidzwa kuzvitaura, rangarirai kuti izvi zviri kutapwa uye pasi rese richazvinzwa, asi ndiri kusiya hushumiri nechikonzero chandinokumbira kuti mundiregerere kuti ndiri kusiira. Uye vamwe venyu pamwe vakazvinzwa, ndiri kusiya hofisi yangu, nezvimwewo, ndichisiya basa iri.
Handizivi kuti Mwari vachaitei neni uye kuti vachandiendesa kupi, izvozvo handina simba pazviri, kana chero zvimwe zvaachati ndiite. Asi ndiri kufunga ndiri pamapeto penzira pandinofanira kugumira. Uye ndichidzika nenzira yehupenyu, ndakaita zvizhinji zvandakakanganisa zvandinodemba kubva pasi pemoyo wangu, nekuti, ndinofunga, nekuda kwekuva munhu ndine zvandinotadza nezvimwewo, zvinoita kuti munhu aite kana kutaura zvinhu izvo... uye kubata mabasa aunenge usingade kuita nedzimwe nguva. Asi nekuda kwekutadza kwemunhu wenyama, nei, tine nguva dzakadaro. Asi kune ...
Kurwisa hunhu hwehushumiri hweHama Branham kwakaipa, zvakadaro zvakare pakuita izvi kune umwe munhuwo zvake kana hushumiri huri kuedza kuparidza chokwadi cheEvhangeri. Asi kunongedzera kukanganisa kuitira kuti tisimudzire kururama kwehushumiri hwaJesu Kristu, ndiko kurwisa mweya waantikristu nemasimba edu ose. Tinofanira kuona simba guru uye chinzvimbo chikuru chaJesu Kristu.
VAEFESO 1:20 Raakabata muna Kristu, achimumutsa kuvakafa, nokumugarisa kurudyi rwake kudenga.
21 Kumusoro-soro kwavabati vose, novukuru, nesimba, novushe, namazita ose anorebwa, pasati pari panyika ino bedzi, asi paneinozovuya vo:
Pauro akataura zvinotevera.
1 Vakorinte 11:1 Ivai vateveri vangu, seni ndiri muteveri waKristu.
Pauro haana kureva kuti anotevera Kristu uye isu tinofanira kutevera kumashure kwake sezvidanho, izvozvo zvinorwisa maGwaro:
Johane 8:12 Zvino Jesu wakataurazve navo, akati : Ndini chiedza chenyika; unonditevera haangatongofambi murima, asi uchava nechiedza chovupenyu.
Pauro aireva kuti tinofanira kutevedzera mararamiro ake sezvo iye aitevedzera mararamiro aKristu. Kutevedzera kwakasiyana kwazvo nekutotevera nekuzviwisira kumunhu. Tinofanira kutevera nekuzvipira kuna Jesu Kristu chete.
Pano pane chinhu chikuru chakakanganiswa neHama Branham, kuratidza kuti vaive munhu kunge isu:
64-0802 MUSHA UNOUYA WECHIKOMBA CHEDENGA NEMWENGA WEPANYIKA JEFFERSONVILLE.IN V-3 N-5 SVONDO_
« 166 Tarirai pano , vamwe venyu vadzidzi veBhaibheri, kunyanya Dhokotera Dale vakanditarisa. Tarirai kuna Petro,, muchaputa yechipiri yaPetro pano, chaputa yechitatu, akashandisa shoko rekuti “nyika,” seizwi rechiGiriki rekuti kosmos, zvinoreva kuti “hurongwa hwenyika.” pasi richadarika, kunyungudutswa zvese zvaro nemoto unotyisa.” Mazviona? Musareva kuti pasi, pasi pano pachadarika. Asi nyika, kosmos, zvematongerwo enyika, vatadzi, kuita kwayo, zvivi, zvirwere, hutachiona zvimwe zvese zvakaipa, zvichadarika. Zvese zvaive...
167 Mwari vakambozunungutsa matenga, asi parizvino akati achazunungutsa pasi, denga nepasi... “Akazunungutsa pasi,” pachinzvimbo, “Uyezve rwendo rwuno akati achazunungutsa matenga.” Mazviona? “Tichagamuchira hushe husingazozunungutswi.” Hushe husingagumi. Tarirai kuti anoenda sei pazviri.
Hama Branham vaitaura nezvemavhesi anotevera:
2Petro 3:10 Asi zuva raShe richauya sembavha; vusiku naro denga richapfuura (G3928) nokutinhira kukuru, nezvedenga zvichaparadzwa zvichipiswa, nenyika namabasa ari mairi achapiswa.
11 Izvi zvose zvichaparadzwa (G3089) saizvozvo, imi munofanira kuva vanhu vakadiniko pamufambire wenyu mutsvene nokunamata.
« 173 † Zvino, vakawanda venyu vanoda kuisa pasi izwi iri, rechiGiriki, “kupfuura”. Rinobva pazwi rinoti... regai ndiritsvage. Ndanga ndichifunga kuti “Nyika ino ingapfuure sei, asi tichazorarama mairi?” asi kana muchizoona, vamwe venyu vanoda kurinyora pasi ndichariperetera. Handikwanisi kuridaidza kwazvo, p-a-r-e-r-e-c-h-o-m-i-a. Handizivi kuti rinodaidzwa sei.
174 Zvino, saizvozvo, sezvandataura, kana ndikawana... kuda uku kunondibatira chimwe chinhu, zvino ndobva ndadzokera kunotsvaga izwi iri. Ndinokwanisa kuperetera izwi iri, kana kuti handikwanisi kuridaidza. Asi, naizvozvo, Mwari vangondipa zvakare nzira. Ndakaenda ndikanotsvaga kuti izwi rinorevei, ndikazviwana. Mazviona? Ndikariwana zvakare. Mazviona?
175 Denga nenyika zvichapfuura, zvino, izwi iri rinoreva kuti, “kubva mune chimwe chimiro ichienda mune chimwe.” Harirevi “kuparadzwa,” sezvingarehwa neizwi iri muchirungu, kupfuura kuparadzwa . Asi Izwi rechiHebheru kana chiGiriki , harirevi kupfuura; rinoreva kubva pane chimwe chinhu kuenda pane chimwe.” Tarirai, asi, “kupfuura kubva pane chimwe chimiro,” rinoti, “kuenda kune chimwe.”
Izvi ndizvo zvinoreva izwi iri zvichienderana neduramazwi reStrong.
kubva ku G3844 ne G2064; kuswedera padyo kana parutivi, ndiko kuendera, kuswedera (kusvika), kudarika (kana kupfuura), (kufungidzirwa) kuparara kana kurashwa, (kukonzeresa) kufuratira: – kuuya (kubva panzvimbo yokutanga) kuenda, kudarika (kure, ne, pamusoro), kudarika, zvinotarisirwa.
Pachokwadi Hama Branham havana kukwanisa kuwana zvinoreva, kana kuti izwi iri chairo.
« 176 † Zvino tarirai, Pauro akarishandisa, kana muchida kuriverenga parizvino. Rinyorei pasi, mozoriverenga pava pamberi. Kuna Tito 3:5 Pauro anoshandisa izwi rimwechete iri, kureva kuti kuvandudzwa kwemunhu, munhu mumwechete uyu avandudzwa kubva pakuva mutadzi kuva mutsvene kwete kuparadzwa kwakazara. Kana munhu achishandurwa, haaparadzwi, asi anoshandurwa. Akashandurwa kubva kune zvaaive kuenda kune zvaave nhasi, kwete kuparadzwa.
Tito 3:5 Wakatiponesa asingazviiti nokuda kwamabasa akarurama, atakanga taita isu, asi nokuda kwenyasha dzake, nenzira yokushambidzwa kwokuberekwa kutsva nokuvandudzwa (G3824) noMweya Mutsvene;
Izwi rekuvandudzwa pano muna Tito ndi “palliggenesia”. Harisi izwi rimwechete neriri muna 2 Petro 3:10
Kubva pana G3825 na G1078; (pamweya) kuzvarwa patsva (mamiriro echiitiko) chinova (chisingaoneki) kushandurwa pamweya: kushandurwa muna Mesiah : - kuvandudzwa.
« 177 † Jesu akasevenzesa kutaura kumwechete uku kuna Mateo 19:28; kwete 28:19. Zvino 19:28, akati kwavari, “Imi vo muchagara pazvigaro, pakuberekwa kutsva” mazviona, vakashandurwa,” kana mashandurwa. Akashandisa shoko rimwechete.
Mateo 19:28 Jesu akati kwavari: Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, imi makanditevera pakuberekwa kutsva (G3824), kana mwanakomana womunhu achizogara pachigaro chovushe chokubwinya kwake, imi vo muchagara pazvigaro zvinegumi nezviviri, muchitonga marudzi ane gumi namaviri aIsraeri.
Ndiko kutaura kumwechete kwakashandiswa kunaTito 3:5 asi hazvisi zvimwechete nekuna 2Petro 3:10. Hama Branham nekukanganisa, semasikirwo akaitwa vanhu, vakazviisa kuizwi rchiGiriki risiri iro.
178 Akashandisa izwi rimwechete paakati, kumhuru yembongoro “sunungurai mhuru yembongoro muisiye iende.”
Mako 11:2 Akati kwavari; Endai kumusha wakatarisana nemi; pakarepo kana muchipinda mauri , muchawana mhuru yembongoro yakasungirwa, isina kumbotasva nomunhu; muisunungure (G3089) mugovuya nayo.
Hama Branham vakaita mazwi matatu avakasanganisa. Izwi rechiGiriki rekuti kusunungura ndi “luo” ndiro izwi rimwechete rakashandiswa kuna Petro 3:11 pakuparadzwa.
Chiito “kusunungura” (zvinooneka uchibata kana zvisinaonekwe zvepamweya):- kudambura, kuparadza, kunyungudutsa, (kusa-) sunungura, nyungudutsa, kubvisa. Fananidza G4486.
« 184 Tinoverenga kuna Johane, verengai Johane kuna Zvakazarurwa 6:14, mazviona, “ rakabva sebhuku.” Bhaibheri rinoti ...raka... Johane akati, “Ndakaona denga nenyika zvichibva sebhuku.” Johane, Zvakazarurwa 6:14.
185 Jesu akati, “denga nenyika zvichapfuura,” kana mamwe mazwi “Denga nenyika zvichavandudzwa.” Mazviona akashandisa zvakare izwi rimwechete iri ipapo.
186 Kwete, kwete kuvandudzwa. Nekuti, kumberi, kuna Zvakazarurwa 21:2 kusvika kuna 24, akaona Jerusarema Idzva richiuya kubva kuna Mwari richibva kudenga, richisvikogara pamusoro penyika ino. Hazvirevi kuti ichavandudzwa. Asi maitiro ezvinhu achashandurwa.
Zvakazarurwa 6:14 Denga rikabva (G673) sebhuku, kana ichipetwa; namakomo ose nezviwi zvose zvakabviswa panzvimbo dzazvo.
Izwi rechiGiriki rekubva ndi “ apochōrizō”. Kukanganisa kwechina. Harifambirane nemashoko ese ataurwa .
kubva pana G575 na G5563; kubvarura; zvinoratidza kuti kupatsanura: – kubva (kuparadza).